ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို ငြိမ်ကျသွားစေမယ့် အစွမ်းထက်စကားလုံး (၉) ခွန်း
Home Parenting ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို ငြိမ်ကျသွားစေမယ့် အစွမ်းထက်စကားလုံး (၉) ခွန်း
တံခါးတွေဆောင့်ပိတ်ပြီး အံကြိတ်ထားတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်၊ အမေ့ကို မုန်းတယ်လို့ သံကုန်ခြစ်အော်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုထိန်းမလဲ? ဒီအချိန်မှာ ကလေးတစ်ဦးပဲမွေးဖူးသေးတဲ့ မေမေတို့အတွက်ကတော့ ကူညီရာမဲ့နေသလိုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကို အေးအေးထားပြီး အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားပေးပါ။ ကလေးရဲ့ စိတ်တွေကို မစုစည်းပေးခင်မှာ သင့်ရဲ့ စိတ်တွေကို အရင်စုစည်းလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ကလေးတွေကို ပြောရမယ့်စကားလုံးတွေကို စဉ်းစားပါ။ ဒီစာကို သတိရလိုက်ပါတော့။
၁။ သားကို အမေချစ်တယ် – သင့်ရဲ့ ဒေါသအိုးလေးကို သူတို့ကို ချစ်ဆဲဖြစ်ကြောင်း သတိပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ကို သူတို့ဘာပဲပြောနေပါစေ သူတို့ကို ချစ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပါ။ ဒီစကားလုံးကို သင့်ကလေးကြားနိုင်သမျှ တည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ထပ်ခါတလဲလဲပြောသင့်ပါတယ်။
၂။ သားစိတ်ဆိုးနေတာကို အမေမြင်တယ် – ဒေါသကို ရုပ်ပိုင်းအရ မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကလေးတစ်ဦးကို သိစေခြင်းကြောင့် ဒေါသထွက်နေတဲ့အခါ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေမှုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိရှိစေပါတယ်။ ဒီအချက်က ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ထက် အခြေအနေအကြောင်းကို ကလေးတွေကို ပြောဆိုဖို့အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စိတ်ဆိုးတာက အဆင်ပြေတယ် – ကလေးရဲ့ ခံစားချက်ကို လက်ခံပေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နားမလည်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ နားမလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေစသဖြင့် အဲ့ဒီ့အရာတွေက ခုအရေးမကြီးသေးပါဘူး။ သူတို့ခံစားချက်တွေကို တံဆိပ်ကပ်ပေးဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
၄။ အမေ့အကူအညီလိုချင်လား? – စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်က သူတို့ကို ပွေ့ဖက်ထားဖို့ဆိုတာမျိုး သင်ဖတ်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ချို့ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးစိတ်ခံစားမှုအတွက် အကူအညီ (သို့) ဘယ်လိုထိတွေ့မှုမျိုးမှ မလိုချင်တာမျိုးတွေရှိကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်နှင့် အကူအညီတွေကို ငြင်းပယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) လက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါ။
၅။ (….)ဆိုရင် အမေသွားရလိမ့်မယ် – ကလေးတွေက သင့်ကို အော်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ခြေထောက်နဲ့ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို မကြာခဏရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် စိတ်ကို စုစည်းပြီးနေထိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကလေးကို သင့်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အစီအစဉ်တွေကို သိစေခြင်းက နောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေကို အသိပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သမီး စိတ်ဆိုးတာ မပြီးမချင်း အမေဒီမှာ စောင့်နေမယ် အမေ သမီးနဲ့ အနီးကို လာခဲ့မယ်၊ အမေတို့ ပိုရင်းနှီးတာပေါ့ သား စိတ်ဆိုးတာပြေပြီးမှ အပြင်ထွက်လာခဲ့၊ အမေခန်းမထဲမှာ စောင့်နေမယ်။
၆။ (….)တစ်ခုခုကို စမ်းကြည့်ချင်လား? – ဒီအချိန်က ကလေးနဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စကားပြောဆိုဖို့ မလွယ်ကူပေမယ့် ကလေးတွေက မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို မသိလို့ ပိုပြီး ဒေါသထွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို စိတ်ငြိမ်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေမျှဝေပေးပါ(ဂိမ်းတစ်ခုခု၊ ပန်းချီဆွဲတာမျိုး၊….)။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုပြောပြီးတိုင်းမှာ တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ပါ။
၇။ အမေတို့ အစက ပြန်စကြမလား? – တစ်ခါတလေမှာ ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေက ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းမသိကြဘဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတတ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ကမ်းလှမ်းတာက စိတ်ပျက်စရာတွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဒီလိုလုပ်တာ အဆင်မပြေဘူး – ကလေးတွေရဲ့ ဒေါသကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ချို့ကို သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်သလို လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ဖို့ပါ။ တစ်ခြားလူတွေကို ထိခိုက်စေမယ့် ပစ္စည်းပေါက်ကွဲစေတာမျိုး လုံးဝအဆင်မပြေကြောင်းပြောပါ။
၉။ ငါတို့နောက်ဆုံးအကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ဖူးတာကို သတိရတယ် – သင့်ကလေးက စိတ်ခံစားမှုကြီးကြီးနှင့် နာကျင်မှုခံစားချက်တွေကို စတင်နေပြီဆိုရင် ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုင်တွယ်ခဲ့ဖူးသမျှအရာတွေကို သင်မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာတွေက ဒီအချိန်တွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဒေါသတွေကို အရှိန်ကျစေပါလိမ့်မယ်။
Previous articleမေမေတို့ကလေးတွေကို လေးစားမှုနဲ့ ဆက်ဆံပါသလား?
Next article၆ လပြည့်ပြီးတဲ့ ကလေးတိုင်း လိုအပ်တဲ့ အာဟာရနဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေဖို့ ကျွေးသင့်တဲ့ ဖြည့်စွက်အစားအစာ ( ၅ )မျိုး
ပဋိပက္ခတွေကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းဖို့ ကလေးတွေကို ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၅)မျိုး
ကလေးမွေးခြင်းက အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာတွေအတွက် အဖြေမဟုတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၆)ချက်
မိဘတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်သော ကလေးတွေအပေါ် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ရမယ့်အရာများ